Google Chokwadi - Yechinyakare uye Inobhadharwa Kutsvaga
Chishanu, Mbudzi 2, 2012 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Kunyangwe iwe uchivakoshesa kana kuti kwete, Google ine yavo nhandare yekutengesa inofanirwa kunge iri kushandirwa nevashambadzi. Kunyangwe iri yakabhadharwa kushambadza neGoogle kana kuisirwa organic muinjini yekutsvaga, unogona kunge uri kushomeka kusvika kweGoogle. Iyi infographic kubva kuWordstream inoisa zvese mumaonero.
From Wordstream's Google Chokwadi Infographic: Yedu tsvagurudzo yeiyo infographic yaisanganisira anopfuura mazana maviri nemazana mazana matanhatu emakambani eAdWords akamhanya neAdWords Grader muQ2,600 3. Maakaundi muhuwandu akamiririrwa anodarika madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora pagore. Takanga tine maakaundi ane huwandu hwakasiyana hwekushandisa; mamwe maakaundi aive madiki kwazvo, achishandisa pasi pe $ 2012 pamwedzi paAdWords. Zvimwe zvaive zvakakura zvakanyanya, nevamwe vachishandisa kusvika kumamirioni pamwedzi muAdWords. Iko kuongorora kwakatarisa maakaundi kune ese maindasitiri, uye kwakabva kune nyika dzese uko Google inoita bhizinesi.
Iyo data yeiyi blog positi yakabva kuIzwi yekudzidza kwechangobva kuitika pa Google webhu nhamba, iyo yatinofunga seimwe yeakanyanya kuongororwa mashandiro ekushanda kwemukati kweGoogle Ads yakamboitwa.
Tags: google adsgoogle ppcgoogle seoGoogle +organic searchkubhadhara pakukandaSearch Engine Optimizationseo
Pinfluencer: Kushambadzira uye Ongororo Kubva Pini kusvika pakutenga
Matanho mashanu Ekuwedzera Traffic uye Shandura Zvinotungamira kuva Vatengi
Nov 3, 2012 pa1: 32AM
Thnks yeruzivo infographics. Ini handitarisiri kutenga / ecommerce webhusaiti kunouya kutanga. Izvo zvandinotarisira ndezvekuti ecommerce inouya yekutanga kuenzaniswa kune yekufambisa maindasitiri.